Showing 1-10 of 480 items.
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हटाउन तयारीका साथ काम प्रारम्भ गरिने बताएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको नियुक्ति भएलगत्तै शैक्षिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने हिसाबबाट सरकारले ...
आफ्ना बालबच्चाको स्वास्थ्यप्रति आमाबुवालाई स्वभाविक चिन्ता र चासो हुन्छ । बच्चाहरु बलिया, तगडा, निरोगी, तन्दुरुस्त, फुर्तिलो होस् भन्ने अपेक्षा राखिन्छ । यस अनुरुप बच्चाको खानपानमा विशेष ख्याल गरिन्छ । बच्चाले पर्याप्त खाना ...
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण झण्डै दुई वर्षदेखि रोकिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा आजदेखि शुरु भएको छ । आजबाट स्नातक तहको पहिलो वर्षको वार्षिक परीक्षा सुरु भएको हो । परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका अनुसार आजबाट ब ...
किन पूज्य छन् गुरु ?
‘गुरु ब्रम्हा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षत परब्रम्हा तस्मै श्री गुरुवे नमः ’ आज गुरु पूर्णिमा । ‘गु’ को अर्थ अन्धकार र ‘रु’ भन्नाले प्रकाश बुझिन्छ । ज्ञानरुपी प्रकाशले अज्ञ ...
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा आजबाट सुरु हुने भएको छ। आजदेखि १३ गतेसम्म विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमको परीक्षा हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार परीक्षामा सहभागि हुन विद्यार्थीले ७२ घण्टा ...
नर्मल डेलिभरी गराउने कि सिजेरियन दम्पती एवं गर्भवतीको मनमा उठ्ने तर्क–विर्तक हुन् । सामान्य डेलिभरी गराउनु उचित हुन्छ वा सिजेरियन ? कुन सहज र सुविधायुक्त ? कुन सुरक्षित ? कुन राम्रो ? किनभने अहिले सिजेरियन डेलिभरीको ट् ...
हामी किन झुट बोल्छौं ?
‘कहिल्यै झुट बोल्नुहुन्न है’ संभवत यसरी हामी सबैले आफ्ना बालबच्चालाई अर्ती दिएका छौं । हामी उनीहरुलाई सम्झाई–बुझाई गर्दै भन्ने गर्छौं, ‘कहिल्यै, कसैसँग झुट नबोल्नु ।’ तर सोचौं त, तपाईं-हामीले कह ...
दम्पतीको लागि एक सुखद् सूचक हो, गर्भ रहनु । जब दम्पतीले सन्तानको योजना बनाएका हुन्छन्, तब गर्भ रहनु उनीहरुका निम्ति सुखद् खबर हो । तर, कतिपयको लागि यो खबरले त्यस्तो सुख दिदैन । अनपेक्षित रहने गर्भ उनीहरुका निम्ति टाउको दुखाईक ...
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि एक हप्तायता कोरोना संक्रमण दर फेरि बढेको बताएको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी अब चुनौतीपूर्ण तेस्रो लहर शुरु हुन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई त ...